🥇 ▷ Kuwani waxay noqon doonaan sawirradii ugu horreeyay ee ruxmay HoloLens # MWC19 ✅
Kuwani waxay noqon doonaan sawirradii ugu horreeyay ee ruxmay HoloLens # MWC19
Adeegsiga barta Twitter @ h0x0d (WalkingCat), oo caan ku ah shaandhaynta alaabada la xidhiidha Microsoft, Waxaa la daabacay waxa noqon doona sawirradii ugu horreeyay ee jiil cusub ee HoloLens.
Tan dambe waxay noqon doontaa muraayadaha cusub ee loo yaqaan ‘AR’ muraayadaha casaanka ee Redmond’s.
– SocodkaCat (@ h0x0d) Febraayo 24, 2019
Tani waxay noqon laheyd HoloLens cusub
Sawirka: SocodkaCat (@ h0x0d)
Cabbirkeeduna wuxuu ahaan lahaa yar marka loo eego kuwii ka horreeyay. Wejiga hore wuxuu lahaan doonaa padding dheeri ah iyo garaac hagaajin gadaal ah in madaxa lagu haayo meesha.
Mid ka mid ah dadka la qabtay waxaad ku arki kartaa qof ku takhasusay cilmiga caafimaadka adoo adeegsanaya HoloLens-ka cusub. Laga yaabee in hay’addu ka fikirtay wax kabadan hal suuq iyo / ama suurtogalnimada waqtiga la isticmaalay.
Waxsoosaarkan ayaa lahaan lahaa goob aragti horumarineed, a qori sirdoonka macmal la xoojiyey iyo processor-ka ‘Qualcomm Snapdragon 850 ARM processor’.
Tusaalayaasha kale waxaa jira haweeney aan ka faaiideysan doonin oo keliya taageerada dhaqdhaqaaqa, laakiin sidoo kale muujineysa tan gadget taageer dhaqdhaqaaqa taabashada iyo xitaa suurtagalnimada inaad riixdid ama aad toos ula falgallo hologram toos ah farahaaga.
Bixinta ayaa hadda si dhammaystiran loo dhammaystiray, iyada oo hab ah, oo leh goob kale oo aan fiidyow ku daawayn jirnay shaaha ee HoloLens cusub.
Ka soo qaybgal munaasabada Microsoft
Microsoft waxaa laga filayaa inay soo bandhigto muraayadahaas munaasabad aad adigu iska leedahay maanta wajiga MWC19 isla, Axadda, Febraayo 24 ee sannadkan 6:00 p.m. kana yimid Spain (GMT + 1). Taasi waa, saacadu markay tahay 2:00 p.m. ka yimid Chile.
Shir caalami ah oo loo yaqaan ‘Mobile World Congress’ ayaa soo socda oo @gonzomau mar horeba lagu dhex rakibay Barcelona si uu u daboolo # MWC19. Maxaad ka fileysaa carwadaan? Inta u dhaxaysa Feebarwari 25 iyo 28 waxaan noqon doonnaa xuddunta warshadaha guur guura ee adduunka.
Oo iyana waxay yiraahdaan we waxaan si lama filaan ah u keenay MWC-kan. pic.twitter.com/Dp6CfnWn6t
– Waraaq waraaq (@pisapapeles_net) Febraayo 23, 2019
Waraaqdu waa mid nool oo ka socota Barcelona. Marka la soco inaan ku siin doonno macluumaad gacanta ugu horeeya.